Tag: zanakalahin'i indianapolis | Martech Zone
Tag: zanakalahin'i indianapolis
Ny Super Bowl 2012 anay, kinova 2!
Alatsinainy 25 Febroary 2008 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Mitohy ny fandrosoana! Izaho sy i Pat Coyle dia niara-niasa tamin'ny talenta lehibe (Tim sy Curtis) tao amin'ny Innovative tamin'ny fanatsarana ny tranokala natokana ho an'ny tolotra ho an'ny Super Bowl 2012 eto Indianapolis. Ny komity Super Bowl dia tarihin'i Mark Miles, filohan'ny fiaraha-miombon'antoka orinasa Indiana Indiana. Mark dia manao asa miavaka sahady, mandray mora foana ny teknolojia web hampahafantatra sy hitady ny fanohanan'ny fiarahamonina. Ity 'kinova' an'ny
Asabotsy, Aogositra 18, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Rehefa nangataka olona izay mety ho liana amin'ny famaliana valiny tamin'ny fanadihadiana momba ny SAP tamin'ny sôsialy i Shel, dia nanararaotra nanararaotra aho ary nanoratra azy avy hatrany. Nahazoan-dàlana an'i Shel dia namela ahy hametraka ny valinteniko tao amin'ny bilaogiko izy. Ity no Fizarana I! Lazao amiko hoe oviana ary ahoana no nahaliana anao voalohany tamin'ny haino aman-jery sosialy. Nahoana? Niasa tao amin'ny Print Media nandritra ny folo taona mahery, nijery aho rehefa nanomboka haingana ny Internet
Asabotsy, Jona 3, 2006 Asabotsy Jolay 12, 2014 Douglas Karr
Tamin'ity zoma ity dia nanana voninahitra ny fanatrehana fivoriana niaraka tamin'ireo orinasam-panjakana voatanisa tena tsara sy mpitarika indostrialy eo an-toerana aho hiara-hiasa amin'ny Colts amin'ny ezaka ataon'izy ireo manao "Ataovy manokana" amin'ireo mpankafy azy ireo. Fikambanana mahafinaritra ity ary manaja indrindra azy ireo. Mampiasa ny loharanom-pahalalana rehetra azon'izy ireo atao izy ireo mba hanatsarana ny fifandraisana amin'ny mpankafy azy ireo, ary hitondra azy ireo ho akaiky ny fikambanana toy ny